Ny Galaxy J4 + sy J6 + dia miseho voalohany amin'ny tranokala Samsung | Androidsis
Ny Galaxy J4 + sy J6 + dia mipoitra ao amin'ny tranokala Samsung
Eder Ferreno | | Finday, Samsung
Roa herinandro lasa izay dia voalaza fa hanavao ny Galaxy Galaxy J miaraka aminy i Samsung telefaona vaovao roa, izay tokony ho ny Galaxy J4 + sy J6 +. Tamin'izany fotoana izany dia tsy dia fantatra loatra momba ireo maodely ireo, ny fisian'izy ireo dia tsy ofisialy akory. Na dia samy niseho tsy nahy tao amin'ny tranonkalan'ny orinasa koreana aza izy roa. Ka isika no manana sary voalohany.
Andrasana noho izany Ireo modely roa ireo dia haseho amin'ny 25 septambra. Na ny Galaxy J4 + na ny J6 + dia samy mampiasa efijery tsy manam-petra miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9. Ka i Samsung dia mitondra ireo karazana efijery ireo amin'ny faran'ny ambany amin'ny katalaoginy.
Ny efijery infinity dia tsy ilay endri-javatra afa-tsy izay hitanay tamin'ireto Galaxy J4 + sy J6 + ireto. Araka ny ireo maodely roa ireo dia hanana sensor amin'ny dian-tànana hita eo anilany. Toerana somary hafahafa izy io, zara raha hita eny an-tsena. Mazava izany fa mbola mitady ny toerana tsara indrindra hahitana an'ity sensor ity ny marika. Ho hitantsika ny fomba fiasan'ity lafiny ity.
Ao amin'ny fizarana sary, iray amin'ireo maodely roa ihany no hanana fakantsary roa sosona, izay antenaina ho maodely ambony indrindra. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy afaka nanamarina izany. Izy io dia mahita ny fomba filalaovan'i Samsung ny fakan-tsary indroa amin'ny faritra hafa.
Tsy manana famaritana momba ireo Galaxy J4 + sy J6 + amin'izao fotoana izao izahay. Tao anatin'ny herinandro mahery dia hatao ny fampisehoana ireo telefaona roa ireo. Ka tsy mila miandry ela intsony isika vao hahalala ny momba azy rehetra.
tokoa afaka andro vitsivitsy dia mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ireo Galaxy J4 + sy J6 + izahay. Noho izany dia hitandrina isika amin'izay omen'ireto maodelin'ny orinasa koreana ireto. Efa ho avy ny fanavaozana ny faritra Samsung Galaxy J.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy J4 + sy J6 + dia mipoitra ao amin'ny tranokala Samsung
Ny fipoahana ny Galaxy Note dia miverina eny an-tsena. Izao dia miankina amin'ny Note 9
Izahay dia mizaha ny kaody CSS izay manapaka ny iPhone sy ny iPad rehetra ary mitranga izany